ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
တိုးနှောင်မိုး – ကဗျာဆရာ အယ်ဒီတာ ယမုံကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် သိသိချင်း ရေးခြစ်မိခြင်း
ယမုံ ကဗျာဆရာ အယ်ဒီတာ ယမုံကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် သိသိချင်း ရေးခြစ်မိခြင်း တိုးနှောင်မိုး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ အစ်ကိုယမုံရေ လူဘဝဆိုတာ အဝတ်လှန်းတဲ့တန်းပြတ်ကျသလို။ အစ်ကိုရေ လူဘဝဆိုတာ သေမင်းကအနားမှာရှိနေပြီး ဘွားခနဲလက်ဆွဲခေါ်သလိုပါပဲ။ အစ်ကိုရေ...
အေးငြိမ်း ● ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပျက်မိသော အရာတခု (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ ကျွန်တော်ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘဝကတည်းက အလွန်ရွံမုန်းခဲ့သော အရာတခုသည် ရှိခဲ့၏။ ကျွန်တော့်လိုပင် နိုင်ငံသားအတော်များများသည်လည်း ကြည့်လို့မရခဲ့ပါ။ ကြည့်လို့မရကြကြောင်းကို လူရွှင်တော်များ ထုတ်...
ကိုသန်းလွင် ● သမ္မတ ကိုဖြုတ်ရန်တန်ပြီ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ (၁) ယခုအချိန်အထိတော့ အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကို အမေရိကန်ပြည်သူများကဖယ်ရှားမပစ်လိုသေးပါ။ သူလာစဉ်ကကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီမဲနှင့်သာထွက်ခွာသွားစေလိုသည်။ သို့ပါသော်လည်းလွန်ခဲ့သောအပါတ် ကမူ ထိုအမြင်ကို ပြင်ရမလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့အတွက်ကျန်သောနှစ်နှစ်...
အေးငြိမ်း ● ကျွန်တော် စာကဗျာများကို ချစ်တတ်လာပုံအကြောင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂ဝ၁၈ (၁) များသောအားဖြင့်တော့ ကျောင်းစာအုပ်များကို စိတ်ဝင်စားနှစ်ချိုက်သူ အတော်နည်းလှ၏။ မဖြစ်နိုင်လို့သာ သင်နေရသည်၊ စိတ်ကတော့ သိပ်မဝင်စားလှ။ အပြင်စာအနေနှင့်...
မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၈၃) သရော်ထားသည့် ဤ၀တ္ထုကြောင့် အလုပ်မပြုတ်သည့်ပြင် …. (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈ (၁) ၁၉၆၅ ခု၊မတ်လ တမနက် ဤ၀တ္ထုကိုရေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း...
ကိုသန်းလွင် ● တရုတ်ပြည်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှု (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၉ (၁) ၁၉၈၈ ခုနှစ်က အလည်ရောက်လာသော နိုဘယ်စီးပွားရေးဆုရှင် မစ္စတာဖရီးမင်း (Milton Freeman) က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါ တီ၏ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြင့်...
ကိုသန်းလွင် ● တရုတ်ပြည်လျှောက်ခဲ့သောလမ်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈ (၁) မော်စီကုန်းကွယ်လွန်ပြီးနောက် မသေမချာမရေရာဖြစ်ခါစအချိန်၊ တရုတ်ပြည်သည် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးမလာမီအချိန် ကွန်မြူနစ် ပါတီသည် တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုပြုပြင်ရမည့်ကာလမရောက်မီအချိန်တွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတစုတို့သည် ရှန်ဟိုင်းမြို့အနီးမှတောတောင်ထူထပ်လှသော...
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● အဖေ့စာ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ညက တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ရွှေခေတ်၊ ရွှေအနှစ်၊ ရွှေသီချင်းများနဲ့ “ရွှေအိုရောင် ဂီတည ၂၀၁၈”...
စိုးခိုင်ညိန်း ● ဆောင်း နံနက်ခင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၈ ညက ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မနက်စောစော အိပ်ရာမှ ထလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းရေးလုပ် မျက်နှာသစ်ပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ရသည်။...
Page2of 97«12345...97»